I-China EAS Ivenkile yokuThengisa i-58khz AM Ivenkile yokunxiba iAlarm Anti-theft Aystem Gate-PG400 abavelisi kunye nabathengisi Etagtron
•Ingagubungela indawo ebanzi ngeeyunithi ezimbalwa. Zimbalwa iziqwenga zomzimba zithetha ukuba iindleko zofakelo kunye nolondolozo ziyehla.
•Konke kuyilo lwe-eriyali. Ukufakwa ngokulula.
•Ukufumanisa umgama kunokufikelela kwi-3.6m ngee-eriyali ezimbini kuphela.
•Ungongeza i-eriyali ngokusekwe kububanzi bokungena.
Inkqubo ye-EAS AM-PT309
I-0.6-2.8m (ixhomekeke kwithegi kunye nokuzonwabisa kwindawo)
Umgangatho ophezulu we-ABS weplastiki;
Isiseko se-2.Master sinokusebenza ngokwawo ngokufumana okuhle; Ngelixa isiseko sokuFumana kwakhona kufuneka sisebenze kunye ne-Master pedestal;
3.Excellent kwaye ubhaqo ububanzi umgama othusayo;
I-4.Level-Inye yokuchasana nokuphazamiseka; ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, impazamo yokunxibelelana nebhodi ephambili.
Inkqubo ye-alarm ye-AM EAS ingasetyenziswa kwiivenkile zeempahla, iivenkile ezinkulu, imithwalo kunye neebhegi, iivenkile zabantwana nazo zonke ezinye iivenkile ezithengisa izinto.
izinto ze-ABS ezingaphantsi, ukukhanya kunye nokulula ukuphatha
♦Uluhlu lokufumanisa i-eriyali yi-0.6m ~ 2.8m (kuxhomekeke kwimeko eyiyo). Emva kokusebenzisa ithegi ethambileyo ye-DR, olona hlobo lubanzi lokhuselo phakathi kwee-eriyali ezimbini lunokufikelela kwi-1.5m. Ii-eriyali ezintathu zisebenza ngokulandelelana ukukhusela indawo yokungena ebanzi ye-5.6m. Idityaniswe ngokugqibeleleyo nomhombiso obalaseleyo weevenkile ezinkulu, zikhusela ngokulula iivenkile ezithengisa iivenkile zobubanzi obahlukeneyo, ezifanelekileyo kwiindawo ezineevenkile eziphezulu.
♦Ngokwandisa inani lee-eriyali ezichasene nobusela, iivenkile ezinokuthengiswa zinokunyuswa ngokungenammiselo, kwaye ii-eriyali ezininzi zinokusetyenziswa kwi-Intanethi ngaxeshanye ngaphandle kongqamaniso.
Egqithileyo Inkqubo ye-EAS ye-Antenna AM Acrylic umgangatho ophakamileyo we-58KHz yeeVenkile zoKhuseleko lweSango-PG212A
Okulandelayo: Inkqubo ye-EAS ye-RF EAS 8.2mhz ye-RF yoKhuseleko lwe Supermarket yoMnyango we-Antenna-PG308